Celebrity Couple: Sai Sai Khem Hlaing and San Yati Moe Myint | Myanmar Celebrity Couple Photos
Celebrity Couple: Sai Sai Khem Hlaing and San Yati Moe Myint
Here are couple photos of Myanmar Hip Hop Singer Sai Sai Khem Hlaing and Model San Yati Moe Myint. Rumors are circulated that San Yati Moe Myint is the current girl-friend of Sai Sai Khem Hlaing after Wutt Hmone Shwe Yi left Sai Sai. ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေပြီလို့ လူပြောများနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နဲ့ စံရတီမိုးမြင့် Sai Sai Khem Hlaing and San Yati Moe Myint
သဇင်ကိုလိုးချင်သူJanuary 25, 2012 at 11:07 PMမအေလိုး ခွေးသား မင်းကြည့် ပတ်လိုးနေတယ် ငါ့သားReplyDeletepotatoJanuary 27, 2012 at 9:28 PM၀တ်မှုံေ၇ွှရည်နဲ့ဆင်လို့ ကြိုက်တာလားမသိဘူး......ယောကျာ`်းတွေများ အပြောင်းအလဲက တော်တော်များတယ်။။။ReplyDeleteRepliesDatthaFebruary 5, 2012 at 11:10 PM၀တ်မှုန်ကပိုလှပြီးတော့ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ စံရတီက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မျက်အိတ်ကြီးကဖောင်းနေတာ တွေ့ လား။DeleteReplygirlsamuraiFebruary 3, 2012 at 2:40 AM၀တ်မှုံနဲ့ သိပ်မဆင်ပါဘူး..စံရတီ က ပို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်.. ၀တ်မှုန်က ချစ်စရာကောင်းရုံထက်ပိုဘူး...ReplyDeleteSai Sai Kham LengFebruary 5, 2012 at 9:18 PMMr. Editor ..I m sai sai kham leng. I would like to deny officially all this rumors are absolutely wrong..I would like to request u to correct the post for my reputation and san Rati's as well.. All those above pictures are from the movies and commercial shoot.. I m working with her in two movies already which isn't come out yet.. Thank you very much..Regards,Sai Sai Kham Lengwww.Facebook.com/saisai.frenzoReplyDeleteRepliesŽØ Thang BawiJuly 13, 2015 at 5:06 AM😕what's with Myanmar people and rumors.....DeleteReplysongFebruary 6, 2012 at 11:35 AMနောက်ဆုံးညှားတဲ့သုမှအချစ်စစ်လို့ခေါ်င်္ရမလားဒါကြောင့်ဘယ်တစ်ယောက်နဲ့ပဲတွဲနေပါစေစိတ်ကိုမ၀င်စားတာ။ReplyDeleteblackFebruary 26, 2012 at 11:56 PMDog ma tharr..Sai Sai...Lee Kyoo Thay mal...ReplyDeleteMERGUIMarch 4, 2012 at 3:44 AMWOW!What can i say? :)ReplyDeleteppMarch 12, 2012 at 7:27 AMshin toe ka yel bal loke pow!!!ReplyDeletecicadaMarch 12, 2012 at 10:49 PMsan yti ka R-boy nae kyite nay tar...R-boy facebook mar shi tal........ReplyDeleteHeroApril 5, 2012 at 2:18 AMယောက်ျားတွေက ယောက်ျား မိန်းမတွေကလည်း မိန်းမတွေပဲ အကုန်းလုံး ကိုယ်စီဆိုးကြပါတယ်။၀တ်မှုန်ကိုလည်း စိုင်းစိုင်းက လုပ်မှာပေါ့။ မလုပ်ပဲနေမလား။ ဒီလောက်လွယ်နေတာကို။ ရတယ်ကွာ အကုန်သာလုပ်ပစ်။ သူတို့လည်း ခံနိုင်လို့ လာတာ။ လုပ်သာလုပ် စိုင်းစိုင်းရေ။ReplyDeleteemoApril 28, 2012 at 5:33 AMSan Yati Moe Myint က Ah Boy နဲ့ပါစိုင်းစိုင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးReplyDeleteဇေMay 15, 2012 at 7:29 AMဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာ San yati ကိုတော့နှမြှောတယ် ကလေးရေ နည်းနည်းပါးပါးလည်းကြည့်တွဲး အားလုံးကစား ဘဲးကြီးတွေ i လည်းပါတယ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ကောင်ကပိုဆိုးသာပေါ့ .......... စားပြီးနားမလည် ၀ါးပြီးထွေးထုတ် .... ကွမ်းယာနော် တီညှိးမထင်နဲ့ReplyDeleteAungMay 23, 2012 at 12:11 PMYou should think what is the effect your comment before you write it.Rumors can makeartists to be famous with bad news.Artists can lost their audience because of rumors.If you have enough facts,you should share.If you can't say exactly,don't tell alot as rumors.ReplyDeletehenry ayekoJune 4, 2012 at 1:02 AMစော်လေးတွေကအလန်းလေးတွေစိုင်းစိုင်းရေ နုတ်စုတ်ပလိုက်လူတွင်ပါလို့နွားကျားကိုက်တာဖောက်ပလိုက်ReplyDeleteseason rainJuly 5, 2012 at 1:14 AMရက်စက်လိုက်တာမိုးရယ်မင်းကိုယ့်ကိုလုပ်သွားပြိ်ပေါ့ReplyDeleteyellow sexy boxerJuly 12, 2012 at 11:46 AMMin pal lote tot nga Sai yay!ReplyDeleteZO vidoesNovember 17, 2012 at 12:58 PMshe is look like wut hmone shwe yinReplyDeleteEi KoDecember 4, 2012 at 12:46 AMi don't like her because she is very sexyReplyDeleteMyu minDecember 19, 2012 at 4:05 AMကိုစိုင်းဘက်မှာပရိတ်သတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမယ့်သူနဲ့တော့လုံးဝသဘောမတူဘူးနော်ReplyDeleteAntynelar zayarparJanuary 12, 2013 at 7:08 AMဆောက်ရန်းလိုးချင်လိုက်တာကွာReplyDeleteAnonymousJune 8, 2013 at 4:40 PMsai sai is with wutt mhone and san yadi is with ah boyReplyDeleteRepliesŽØ Thang BawiJuly 13, 2015 at 5:11 AMHmm.....You seem to knowalot about Myanmar celebrities.......DeleteReplyAdd commentLoad more...